मासिक धर्म पेटका लागि हेम्प तेल का अविश्वसनीय लाभहरू - मद्दत MEHemp
हरेक महिला अनुभवहरूaको भावना भय जब उनीहरूको महिनाको समय आउँछ। यी समयमा, तपाईं एचयोजना रद्द गर्न र केवल दिनभर ओछ्यानमा कर्ल गर्न Ave। यदि यो दृश्य परिचित देखिन्छ, सिक्ने मासिक धर्म पेटका लागि हेम्प तेल को लाभ मई तपाइको जीवन परिवर्तन गर्नुहोस।
माथि 84.1 प्रतिशत महिलाको पीडा देखि कठोर मासिक दुखाई को प्रभाव। यसलाई डिसमेनोरिया पनि भनिन्छ, यो महसुस गर्दैविशेषताहरु पेटमा एक धड्कन दर्द जब कोही छ अनुभव गर्दै यी लक्षणहरू, उनीहरु प्राय: बाध्य भन्नु विदाई काम गर्न, रात बाहिर, र पनि यात्रा योजनाहरु।
हेम्प तेलको लोकप्रियता हालका वर्षहरूमा बढेको छ। यो अब उपचार गर्न प्रयोग भएको छ स्वास्थ्य मुद्दाहरूको एक विस्तृत एर्रे, क्यान्सर, छाला समस्या, र मासिक पेट दर्द। यसको लागि प्रयोग भएको रिपोर्टहरू पनि आएका छन् अवधि सेक्स. यस्तो देखिन्छ कि हामी हरेक दिन हेम्प तेलको नयाँ प्रयोग र फाइदाहरूमा ट्याप गर्दैछौं।
के Iहम्प तेल?
हेम्प आजको पुस्ताको एक धेरै गलतफहमी भएको बोट हो। मारिजुआना जस्तो छैन, जुन समावेश गर्दछ tetrahydrocannabinol (THC), जसले तपाईंलाई दिन्छaसाइकोएक्टिभ सनसनी (वा "उच्च रहेको" भन्ने भावना),भैंसी यसको लागि पैदा गरिएको छ औद्योगिक र स्वास्थ्य लाभहरु। किनकि यो कानूनी रूपमा बेचिन्छ धेरै राज्यहरु र देशहरुमा, तिमी गर्न सक्छन् जेल समयको बारेमा चिन्ता नगरिकन यसको लाभदायक गुणहरूको अनुभव लिनुहोस् वा munchies प्राप्त गर्दै.
हेम्पको रिच ईतिहास फेरि पत्ता लगाउन सकिन्छ लागि शताब्दीहरु को एक जोडी। यो एक पटक थियोaकेन्द्रिय घटक भित्र कपडा, कागज, र डोरी। हेम्पको ट्रेसहरू समेत भेटिए प्राचीन चीन, मध्य पूर्व, र भारत, जहाँ यो चिकित्साको लागि प्रयोग गरिएको थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ।
हेम्प तेल भैँसी को धेरै प्रकारहरु मध्ये एक हो। यो एक विस्तृत सरणी समेटे छ लाभान्वितial मानव शरीर को लागि पोषक। यो विचार गर्दा, यो कुनै बहुउद्देश्यीय प्राकृतिक उपचारको रूपमा किन डब गरिन्छ भन्नेमा कुनै आश्चर्य छैन। हेम्पमा उच्च स्तर हुन्छ cannabidiol (सीबीडी), केवल THC को ट्रेस मात्राको साथ।
सन बीउ तेल, or हेम तेल, हेम्प प्लान्टको बीउलाई चिसो प्रेस गरेर बनाइन्छ, कसरी नरिवल तेल र जैतूनको तेल निकालिन्छ। यो मा गोल गर्दै छ वैश्विक बजार कई दशक को लागी उत्पादन को एक विस्तृत एर्रे को माध्यम बाट, जसमा साबुन, खाना पकाउने तेल, स्किनकेयर, र सौन्दर्य प्रसाधनहरू समावेश छन्।
गाईको तेल कवर गर्दछ पूर्ण स्पेक्ट्रम तेल को भांगबाट उत्पन्न sएटिवा प्लान्ट। यद्यपि यो उस्तै छैन सीबीडी तेल, जो डाँठ, फूल र बोटको पातहरू प्रयोग गरेर बनाइएको हो।
को h को फाइदाहरू बाहेकEMP oआईएल मासिक धर्म पेटका लागि, यो यो पनि मानिन्छ एक सुपरफूड। यो प्रतिष्ठा यसको कारणले हो खनिज, भिटामिन, र एन्टिअक्सीडन्टको उच्च मात्रा। यो पनि गर्व गर्दछ को सुनौलो अनुपात ओमेगा3र ओमेगा6अमीनो एसिड, जुन आवश्यक पोषक तत्वहरू हुन् जुन हामीले आफ्नो आहारमा खानुपर्दछ.
के - के हुन् मासिक पागल पेट?
तपाईं अघि t विचार गर्नुहोस्ऊ मासिक पागलपनको लागि हेम्प तेलको फाइदाहरू, हामीले पहिले हेर्नु पर्छ यो अवस्था विस्तृत रूपमा.
जब शरीर छ तयारी गर्दै महिनाको त्यो समयको लागि, शरीरले इस्ट्रोजेन उत्पादन बढाउँदछ। यो असर गर्भाशयलाई endometrial ऊतक निर्माण गर्न संकेत गर्दछ। परिणाम यो छ प्रोजेस्टेरोनले यसलाई धमनी र रगतको साथ प्लम्प अप गर्नका लागि स्वागत गर्दछ को निषेचित अण्डा। जब एक अण्डा अन रहननिषेचित, शरीरमा प्रोजेस्टेरोनको स्तर घट्छ।
त्यसोभए, शरीरले टिश्यूहरू र काट्छf रगत प्रवाह यो फिर्ता लिन कोशिस गर्न सक्छ। रगत आपूर्ति बिना, एन्डोमेट्रियल टिशू शेडको लागि तयार हुन्छ। यो चरण दु: ख को पहिलो लक्षण पैदा गर्दछ।
प्रोजेस्टेरोन बिना, एन्डोमेट्रियमको कुनै सुरक्षा हुँदैन। जसरी प्रोजेस्टेरोन घट्दैछ, अर्को रासायनिक बृद्धि गर्दछ - prostaglandins। Tआफ्नो रासायनिक को लागी मार्ग बनाउँछ an सूजन प्रतिक्रिया, दुखाई, गर्भाशय संकुचन, vasoconstriction, पखाला, र भारी रक्तस्राव।
आफ्नो अवधिमा महिलाहरु ओछ्यानमा निरन्तर एक छेउदेखि अर्कोमा घुम्नु पर्ने, पीडालाई कम गर्न विभिन्न औषधीहरू लिने, र आफुलाई विलक्षण विरुवाबाट विचलित गर्ने भावनासँग परिचित छन्। महिलाहरुजो डिसमेनोरियाबाट पीडित हुन्छन् मध्य रातमा पनि उनी उठ्छन् एउटा महसुस गर्दै of असामान्य भारी प्रवाहको कारण चक्कर।
मासिक पेटको दर्द सामान्यतया तल्लो फिर्ता र पेटमा केन्द्रित हुन्छ, सुरु एक महिला अवधि भन्दा पहिले एकदेखि दुई दिन अघि। यो समय सीमा छ जब अण्डाशयबाट अण्डा हुन्छ र तिनीहरूको चक्रको अन्त्यसम्म।
तर असुविधा त्यहाँ अन्त हुँदैन। एसome व्यक्तिहरु बाट ग्रस्त उल्टो, मतली, टाउको दुखाइ, र पखाला को महीना को समयमा आफ्नो समयमा। These प्रभावहरू सुस्त देखि गम्भीर को लागी हुन सक्छ। यी लक्षणहरू बाहेक, महिलाले पनि गर्न सक्दछन् छ भावनात्मक तनाव बढायो।
त्यहाँ over-the-काउन्टर मौखिक उत्पादनहरु को असंख्य छ कि मासिक पेटका समस्याहरु लाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यद्यपि यी उत्पादनहरू सुविधा साइड इफेक्ट, जसमा निन्द्रा, पेटको ऐंठन, र बढ्यो luएनजी स्राव। केहि केसहरूमा यी उत्पादनहरूको यी प्रयोग अन्यमा पनि, एलर्जी प्रतिक्रिया र तीव्र कलेजो असफलता हुन सक्छगम्भीर साइड इफेक्ट।
Hemp Oil मासिक पेटका लागि: म कसरी गर्छुt work?
गाईको तेल आज कल्याण उद्योग मा एक प्रमुख स्थान खोपेको छ। र यो कुनै फ्लोक छैन। को असंख्य लाभयो आश्चर्य उत्पादन द्वारा प्रदान गरिएको विश्वले मानवताका लागि स्वस्थ ठाउँ बनाइरहेको छ।
धेरै व्यक्ति उपचार गर्न हेम्प तेल प्रयोग गर्दछन् को एक पाहुना अवस्था। एकnd प्रयोग मासिक धर्म पेटका लागि भात तेल गर्न सक्छन् प्रदान अचम्मको लाभ कुनै महिलाको लागि जो मासिक धर्म क्र्याम्पमा पीडित छ।
कसरी गर्छ सहन तेल को लागी मासिक पेट दर्द मदत?
एक दशक भन्दा कममा, हेम्प तेल कतै गएको छ सबै ठाउँमा। भांग तेल अब मा छ कफि पसल, किराना स्टोर, र फार्मेसी aisles. र tउनको तेल नाटकीय रूपमा गर्न सक्छन् सीमित असुविधा मासिक संग सम्बन्धित crएम्प्स
हेम्प तेल प्रभावित गरेर काम गर्दछ endocannabinoid सिस्टम (ECS), जसले सबै अ home्ग र प्रणालीहरू जडान गरेर शरीरमा होमोस्टेसिस कायम गर्दछ। यद्यपि शरीरमा क्यानाबिनोइडहरू छन्, बोटबाट लिइएको क्यानाबिनोइड्सले ईसीएसको कार्य बढाउन ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।। भांग र सन तेल धेरै क्यानाबिनोइडहरू समावेश गर्दछ जुन ECS लाई बढाउँदछ। जबकि THC सीधा बाँध्न ECS रिसेप्टर्स को लागि, CBD यसलाई उत्तेजित गर्दछ अझ बढी अप्रत्यक्ष रूपमा।
सन पीडा-दबाउने तत्वहरू समावेश गर्दछ जुन सम्बन्धित क्रम्पहरू ब्लक गर्दछ मासिक चक्र. It ले पाचन कार्यहरू सुधार गरेर पनि शरीरमा सूजन कम गर्न सक्छ। यसको माध्यमबाट, एक महिला फुलेकोबाट छुटकारा पाउन सक्दछन्। Hईम्प तेल गर्न सक्छन् पनि रगत प्रवाह बढाउनुहोस् र oxyg प्रदान गर्न सहयोग गर्न सक्छएन टिश्युहरु मा कि यो आवश्यक छ। यो लाभ क्र्याम्पको सुरुवात रोक्न मद्दत गर्दछ।
गर्भाशय संकुचन प्राय: जसो महिलाहरूले आफ्नो अवधिमा अनुभव गर्दछ। यी संकुचनहरू हुन्छन्गर्भाशय अस्तर बगाउने प्रयासमा। यो अनुभूति एन्डोमेट्रियोसिसबाट पीडित महिलाहरूको लागि बढी कष्टकर हुन्छ। भांगको तेलमा अवस्थित क्यानाबिनोइडहरूले मांसपेशीहरूलाई सजिलैसँग मद्दत गर्न र मद्दत गर्न आराम गर्न दिन्छ बढ्नु रगत प्रवाह यो पनि पेट मा मांसपेशिहरु को आराम गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
हेम्प तेल तल्लो पेट वा पछाडि topically लागू गर्न सकिन्छ। यो विधि अनुमति दिनेछ प्रयोगकर्ता लाई अनुभव हेम्प तेल को मांसपेशी आराम को गुणहरु।
तरंग तेल विधि काम मासिक पेटका लागि
शरीरले सबै कोशिकाहरूमा सन्तुलनको स्थिति कायम राख्न कोसिस गर्दछ। हेम्प तेलले यसलाई हासिल गर्न मद्दत गर्दछ बढाउँदै को को प्रभाव भित्री क्यानाबिनोइड्स मस्तिष्क, पेट, र केन्द्रीय स्नायु प्रणाली मा तंत्रिका र ऊतकहरु मा। यो लाभ होमिओस्टेसिसलाई नियन्त्रित गर्दछ र शरीरका सबै कार्यहरू सुधार गर्दछ।
Uसीबाट व्युत्पन्न उत्पादनहरू गाउनुहोस्annabis sएटिवा प्लान्ट प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोमको उपचार गर्न (PMS) मा फिर्ता मिति 16 सदी। यो प्राकृतिक उपचार लागि Mensural ऐंठन सहायता गर्नेछ in एलिभ्याटआईएनजी तपाईंको PMS लक्षणहरू। नतिजा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं आफ्नो अवधिमा हुनुहुन्छ अधिक सक्रिय बन्नुहोस्।
यहाँ अन्य छन् प्रयोगका फाइदाहरू मासिक धर्म पेटका लागि भात तेल।
मुड स्विings्स रोक्नुहोस्
हेम्प तेलको मूड-बढावा गुणहरू को साथ मद्दत अवधि-सम्बन्धित मुड स्विंग। यो खेल परिवर्तनकर्ता काम गर्दछ राम्रो महिलाहरु को लागी अंडाकार र उनीहरूले महसुस गरिरहेको अस्पष्ट चिन्तालाई हटाउन चाहन्छन्। हेम्प तेलले महिलालाई उनीहरूको चिन्तित विचारहरू स्विच गर्न मद्दत गर्दछ जसले गर्दा उनीहरू राती सुत्न सक्दछन्।
Hइम्प तेलले महिलाहरुलाई शान्त महसुस गराउँछ र समेत टाउको दुख्ने राहत मुड स्विings्ग्सको कमीले उनीहरूलाई स्वास्थ्यको राम्रो अनुभव प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यसले महिलालाई पनि मद्दत गर्न सक्छ जुन उनीहरूको चक्रको अघि र उनीहरूको समयमा चिडचिड महसुस गर्दछन्। हेम्प तेल को एन्टी-एन्टी-चिन्ती गुणका लागि धन्यवाद, महिलाले अब शारीरिक र भावनात्मक तनावबाट राहत पाउन सक्नुहुन्छ जबकि तिनीहरूको अवधिमा.
स्तन कोमलता संग मद्दत गर्नुहोस्
धेरै महिलाहरु जब भएको सुन्निन्छ अवधि यो असर संवेदनशीलता पैदा गर्दछ शरीरका धेरै क्षेत्रमा, तल्लो फिर्ता, पेट, र स्तनहरू सहित। मासिक धर्म सूजन एक असहज भावना को कारण दिन्छ,जुन समस्या हुन सक्छ लागि धेरै महिलाहरु।
यो असहज महसुस को कारणले हुन्छ उदय र पतन हार्मोनहरू। एस्ट्रोजेनले स्तन नलाहरूलाई ठूलो बनाउँदछ, जबकि प्रोजेस्टेरोन कारणs दूध ग्रंथि सूजन भांग तेल मदतsशरीरको नियमन गर्नुहोस् vanilloid रिसेप्टर, जो मध्यस्थताका लागि जिम्मेवार छ को धारणा पीडा
हेम्प तेलको केहि बूँदाहरूले तपाईंको पाचन कार्यलाई सुधार गर्न सक्दछ। बाहेक डायसासबाटशरीरमा सूजन आईएनजी, यो उपचार मतलीबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ। शारीरिक कार्य सुधार गर्ने माध्यमबाट महिलाले कम ब्लोटि and र क्रम्पिंगको अनुभव गर्न सक्दछन्।
सर्वाइकल क्यान्सरसँग लड्न सक्छ
यो turns कि बाहिर हेम्प तेल को लागी अत्यधिक लाभदायक हुन सक्छ कुल मिलाएर महिला स्वास्थ्य। भर्खरको आरesearch फेला पर्यो cannabinoids हेम्प तेल मा पाइन्छ गर्भाशय ग्रीवा क्यान्सर कोशिकाहरूको शुरुआत फैलिनबाट रोक्नुहोस्। यस खतरनाक रोगसँग लड्न सबै उमेरका महिलाहरूको प्राथमिकता हुनुपर्छ। मार्फत को प्रयोग भांग तेल, क्यान्सर कक्षहरू मई फैलिएको छैन,र महिलाहरू अन्ततः प्रगतिबाट मुक्त हुन सक्दछन् यस रोगको अन्तिम चरणमा, जो गर्न सक्छन् मृत्युमा पुर्‍याउनुहोस्।
हेम्प कसरी प्रयोग गर्ने तेल
हेम्प तेलहरू सामान्यतया खस्ने ढक्कनको साथ आउँदछन्। तपाईं आफ्नो जीभमा केवल एक वा दुई ड्रप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि यसलाई निल्न अघि एक मिनेट प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यो बहुउद्देश्यीय तेल पनि हुन सक्छ लिइयो मौखिक, पूरक जस्तै। यदि तपाईं मौखिक रूपमा लिन चाहानुहुन्छ भने, यो एक सानो डोजबाट सुरू गर्न सिफारिश गरिन्छ र बिस्तारै तपाईंको सेवन समयमै बढाउनुहोस्, विशेष गरी तपाईंको पेट संवेदनशील छ भने।
भांग तेल सक्छ पनि topically प्रयोग गर्न सकिन्छ र अन्य तेल संग पातलो गर्न सकिन्छ। वा yकहि यो तपाइँको छालामा सीधा लागू गर्न सक्दछ, लक्ष्यीकरण सूजनयुक्त वा सुख्खा क्षेत्रहरू। यसमा रब गर्नुहोस् र अनुप्रयोग दोहोर्याउनुहोस् अावश्यकता अनुसार. तपाईं पनि ईन्सेलेसन प्रयोग गरेर हेम्प तेल को लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ बाष्पयुक्त
भातको तेल भोजन को एक विस्तृत एर्रेमा समावेश गर्न पर्याप्त बहुमुखी छ। तपाईं संग पकाउन सक्नुहुन्छ it वा बनाउनुहोस् सलाद ड्रेसिंग यो बाहिर। यदि तपाईंले सम्पूर्ण सेवा समाप्त गर्नुभएन भने, बाँकीलाई फ्रिजमा भावी प्रयोगको लागि राख्नुहोस्। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छसलाद जस्तो छैन, तपाईं ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ हेम्प तेल तपाईंको बिहानको खाजा, खाजा, वा बेलुका। जब तपाईं यसलाई पूर्ण पेटमा निषेध गर्नुहुन्छ, प्रभाव लिनको लागि केही घण्टा दिनुहोस्।
क्रम्प्सलाई बिदाइ दिनुहोस्
मासिक आगन्तुक, अवधि, मासिक धर्म, चाची प्रवाह - तपाइँले यसलाई जे पनि कल गर्नुभयो, यसबाट बच्ने कुनै उपाय छैन। जबकि लक्षण र दुखाइको गम्भीरता महिलाका लागि फरक, मासिक धर्म पेटका साथ सबैजना चाहनुहुन्छs यो अस्वस्थता हराउन।
H प्रयोग गर्दैईम्प तेल मासिक पेटका लागि तपाईंलाई आफ्नो मानसिक अवस्था परिवर्तन नगरीकन समस्याहरूबाट मुक्त हुन अनुमति दिन्छ। यो गुणस्तर विशेष गरी ती मानिसहरुको लागि लाभदायक छ जो मारिजुआना प्रयोग गर्न मन पराउँदैनन् तर पनि तपाई अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ को स्वास्थ्य लाभहरू भांग प्लान्ट द्वारा प्रस्ताव गरिएको.
चाँडै नै पर्याप्त छ, तपाईं रातमा मिडोलको लागि पुग्नुहुनेछैन जसमा तपाईं सीयरिंग र असहनीय मासिक धर्म क्रम्पहरू। अघिल्लो नारकीय हप्ता तपाईंले अनुभव गर्नुभयो अन्ततः केही थप सहन योग्य हुनेछ।
प्रयोग हेम तेल मासिक पेटका लागि, तपाईं जिम मा पसिना सत्र हुन सक्छ, आफ्नो साथीहरु संग बाहिर जानुहोस्, रकाममा राम्रो प्रदर्शन गर्नुहोस्।
के तपाईंले कहिल्यै मासिक पेटको लागि हेम्प तेल प्रयोग गर्नुभयो? हामी तलका टिप्पणीहरूमा तपाइँको अनुभवको बारेमा पढ्न चाहन्छौं!
र यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अविश्वसनीय को लागी हेम्प तेल उत्पादनहरू मद्दत मलाई हेम्पमा।